Simba kubva kumvura yakasviba | Green Renewables
Simba rinobva mumvura yakasviba
Adriana | | Thermal simba, Renewable simba, Hydrogen
Kune ese maguta epasi tsvina yemvura Idambudziko guru ravanofanira kusangana naro nekuisa mishonga yekurapa yekugadzirisa. Asi kwemamwe makore ikozvino, tekinoroji, nzira uye masisitimu akaongororwa uye akagadzirwa ayo anotora mukana weiyi tsvina kuti ishande sehwaro hwekugadzira simba.
Iko mukana wekushandisazve mvura yemvura yakasarudzika kwakadai sekuwana biogas, magetsi, kutonhodza mweya nekugara kuchipisa kubva mumvura, magetsi anogadzirwa nehutachiona hunowanikwa mukati. marara nevamwe
Mimwe mienzaniso iyo iri kushanda parizvino ndeiyi:
Muguta reWolfsburg kuGerman rine hurongwa hunowana simba kubva mumarara emvura inowanika biogas inoshandiswa muchirimwa pachayo, uye manyowa anogona kuwanikwa zvekushandisa pakurima.
Muguta reBasel, Switzerland, tekinoroji iri kugadzirwa iyo inodzoresa kupisa kubva kumvura yemvura yakasviba iyo inoenda kuburikidza nekuchenesa kurapwa. Uku kupisa kunoshandiswa zvekare kupisa. Zvinoitika zvakafanana zvinoitika muGermany.
MuUnited States, mapurojekiti ane akasiyana matekinoroji ari kuitwa kuti utore mukana weiyo methane iyo inogadzirwa nekusanganisa mvura yakasviba uye marara ehupenyu. Methane inowanikwa kuburikidza nehutachiona hunoshatisa marara uye gasi rinogadzirwa.
Dzimwe nzira dzekuwana simba kugadzirwa kwema microbial mafuta masero. Maitiro acho ane tupukanana tusingaenzaniswi nemasaisai eiyo tsvina, achiburitsa maerekitironi anoburitsa magetsi emagetsi.
Izvi ndizvo zvimwe zvezviitiko zviri kuyedzwa pasirese, kuitira kudzikisa marara kubva kumvura yakasvibiswa uye panguva imwechete kugadzira matsva matsva esimba, kunyangwe kana ari ekushandisa chaiko kana kwakatemerwa.
Zvakakosha kuenderera mberi nekutsvaga, kugadzira nekugadzira nzira dzekugadzira gasi, magetsi, manyowa nemutengo unodhura, uchishandisa dzimwe nzira senge kuburikidza nemvura yakasviba.
Kana zvichikwanisika kugadzirisa uye kugadzira matsva matsva ekugadzirwa kwesimba nenzira yezvakatipoteredza, matambudziko akati wandei ezvemamiriro ekunze achagadziriswa uye simba repasirese rinowedzerwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Chaizvoizvo Simba » Thermal simba » Simba rinobva mumvura yakasviba
Ndinosimuka zvakanaka chaizvo k pane vaongorori vazhinji kuti vakwanise kushandisa mvura yese nekuti zvinotora zvakawanda uye hatifanire kuitambisa uye avo vanoisa nhau idzi vanomira zvakanaka kwazvo, ndinokutendai zvikuru kune ndavhura zvakawanda yeizvi, mvura yakakosha kwazvo kuvanhu vese.
Zvingave zvakaita sei kugadzira simba kubva mumvura kuburikidza neelectrolysis uye kubatana nemahydrogen masero?